..: Black-eyed Pea - Myanmar Pulses, Beans & Sesame Seeds Merchants Association :..
Specification of Beans
History of Black-eyed Bean
The black-eyed pea, also called black-eyed bean, ChawaLie, Lobia, Mulatto-Gelato in various languages in India, isasubspecies of the cowpea, grown around the world for its medium-sized edible bean. The currently accepted botanical name is Vigna unguiculata subsp.
The first domestication occurred probably in West Africa, but the black-eyed pea is widely grown in many countries in Asia; it was introduced into the Southern United States as early as the 17th century in Virginia. Most of the black-eyed pea cultivation in the region, however, took firmer hold in Florida and the Carolinas during the 18th century, reaching Virginia in full force following the American Revolution. The crop would also eventually prove popular in Texas.
Belize is number4in world production of Black Eye Beans behind Peru, Madagascar and Myanmar. In quality, Belize is ranked 2nd behind only Peru.
Eating black-eyed peas on New Year's Day is thought to bring prosperity. This custom is followed by Sephardi and Israeli Jews to this day. Boiled and eaten whith glutinous rice ,it is served asadelicacy between meals. Also ideal as bean paste and in vegetable curries.
Black Eye Beans are in demand in Arab countries as they form part of the diet in that culture. Neighboring Guyana in South America is wild about Black Eye Beans – practically all of the bean consumption is for Black Eye Beans. A lot goes to the middle east, to countries like the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait and major exports go to Europe as well; countries like Italy, Portugal, the Netherlands, the U.S.A. and Canada
In Myanmar , Black-eyed bean is gown in winter (starting October) and harvested in February to April. Producing States and Divisions are Kachin, Kayan, Kayar, Sagaing, pegu ( East and West), Megue, Mandalay , Mon, Shan ( North) and Irriwady.
In Myanmar,about 60%of total production of Pigeon Pea is exported to India, Singapore, Indonesia, Pakistan, China, Philippines and UAE by oversea or Border trade. Export Volumes are about 8000 tonnes in 2006-07, over 50000 tonnes in 2007-08, about 14000 tonnes in 2008-09, over 40000 tonnes in 2009-10 and about 17000 tonnes in 2010-11 9up to November).
ပဲလွန်းကို -eyed bean, ChawaLie, Lobia, Mulatto-Gelato ဟု အမျိုးမျိုးခေါ်ဆိုကြပြီး ရုက္ခဗေဒအမည်မှာ Vigna unguiculata ဖြစ်ပါသည်။ ပဲလွန်းကို ပထမဦးစွာ အနောက်အာဖရိကတွင် စတင်စိုက်ပျိုးခဲ့ရာမှ အာရှအခြားနိုင်ငံများနှင့် အမေရိကန်တောင်ပိုင်းတို့တွင် ၁၇ ရာစုနှစ်အတွင်း ကျယ်ပြန့်စွာ စိုက်ပျိုးလာခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ ဒေသအများစုတွင် စိုက်ပျိုးသော်လည်း ၁၈ ရာစုတွင် ဖလော်ရီဒါနှင့် ကာရိုလိုင်နား တို့တွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးလာကြောင်း သိရပါသည်။
ဘရာဇီးနိုင်ငံသည် ပဲလွန်းထုတ်လုပ်မှု အများဆုံးနိုင်ငံများဖြစ်သည့် ပီရူး၊ မဒ္ဒက်စကား နှင့် မြန်မာတို့ပြီးလျှင် စတုတ္ထအများဆုံး ထုတ်လုပ်ကြောင်း သိရပါသည်။ ပဲလွန်းစိုက်ပျိုးခြင်း အားဖြင့် မြေဆီလွှာကို နိုက်ထရိုဂျင် ဓါတ်ပိုမိုစေပြီး အဟာရဓါတ်ပါဝင်မှု မြင့်မားကြောင်း သိရပါသည်။ လူတစ်ဦး တစ်ခွက်စားသုံးတိုင်း ကယ်လယ်စီယံ ၂၁၁ မီလီဂရမ်၊ ဗဖာလစ်အက်စစ် ၂ဝ၉ မီလီဂရမ်နှင့် ဘီတာမင် အေ ၁၃ဝ၅ IU နှင့် အခြားအဟာရများ ပါဝင်ကြောင်း သိရပါသည်။
ပဲလွန်းကို ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကို ယူဆောင်လာသည်ဆိုသည့် နမိတ်ဖြင့် နှစ်သစ်ကူးသည့်နေ့တွင် စားသုံးကြောင်းနှင့် ကောင်ညှင်းဆန်နှင့်ရောပြုတ်၍လည်းကောင်း ၊ ပဲအနှစ်အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဟင်းလျာအဖြစ်လည်းကောင်း စားသုံးကြောင်း သိရပါသည်။
ပဲလွန်းကို အာရပ်နိုင်ငံများတွင် ရိုးရာဓလေ့အရ ပုံမှန်စားသုံးမှုပြုလုပ်ပါသည်။ တောင်အမေရိကာရှိ ဂူရာနာတွင် အများဆုံးစားသုံးပါသည်။ ယူအေအီး၊ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား၊ ကူဝိတ်နှင့် အခြား ဥရောပနိုင်ငံများသည် တင်သွင်းမှုအများဆုံးနိုင်ငံများ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပဲလွန်းကို အောက်တိုဘာလတွင် စတင်စိုက်ပျိုးပြီး ဇန်နဝါရီ မှ ဧပြီလအတွင်း ရိတ်သိမ်းပါသည်။။ စိုက်ပျိုးသည့် တိုင်းဒေသကြီးများနှင့် ပြည်နယ်များမှာ ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ စစ်ကိုင်း၊ ပဲခူးအရှေ့အနောက်၊ မကွေး၊ မန္တလေး၊ မွန်၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး တို့ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သော ပဲလွန်းကို ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပြည်တွင်းစားသုံးပြီး ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို အိန္ဒိယ၊ စင်ကာပူ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ပါကစ္စတန်၊ တရုတ်၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် ယူအေအီးတို့ကို ပင်လယ်ရေးကြောင်းနှင့် နယ်စပ်လမ်းကြောင်းတို့မှ တင်ပို့ပါသည်။ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက်တင်ပို့မှုတို့မှာ ၂ဝဝ၆-ဝ၇ တွင် တန်ချိန် ၇၉၅ဝ၊ ၂ဝဝ၇-ဝ၈ တွင် တန်ချိန် ၅ဝ၃၆၉၊ ၂ဝဝ၈-ဝ၉ တွင် တန်ချိန် ၁၃၆၁ဝ၊ ၂ဝဝ၉-၁ဝ တွင် တန်ချိန် ၄ဝ၈၉၆ နှင့် ၂ဝ၁ဝ-၁၁ နိုဝင်ဘာလထိ တန်ချိန် ၁၆၆၈၂ တင်ပို့ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
ပဲလွန်း၏အမည်ကို အောက်ပါအတိုင်း ခေါ်ဝေါ်ကြောင်းသိရပါသည်။
(က) သီးနှံအမည် - ပဲလွန်း
(ခ) ဒေသအခေါ်အဝေါ် - ပဲလွန်း၊ ပဲလွန်းဖြူ၊ ပဲလွန်းနီ
(ဂ) အင်္ဂလိပ်အမည် - COW PEA, BLACK EYED BEAN, ROSE PELUN
(ဃ) ရုက္ခဗေဒအမည် - VIGNA CATJANG, VIGNA UNGUICULATA LINN UNGUICULATA
ပဲလွန်း၏ပုံသဏ္ဍာန်မှာ ဆလင်ဒါလုံးရှည် ပုံစံကဲ့သို့ရှိပြီး ကျောက်ကပ်ပုံကဲ့သို့ လုံးချောသည့် ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါသည်။ အစေ့မှာ ဘိုကိတ်နှင့်ပဲပုတ်စေ့ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ဆင်ပြီး အရွယ်အစားမှာ အလျား (၇) မီလီမီတာ၊ အနံ (၆) မီလီမီတာခန့်ရှိပါသည်။ ဒေသအခေါ်အားဖြင့် ပဲလွန်းပြာကို ဘိုကိတ်ပဲဟုလည်း ခေါ်ပါသည်။ ပဲလွန်း၏ အရောင်အဆင်းမှာ အဖြူနှင့်အနီရောင်များရှိ၍ ပဲလွန်းဖြူနှင့် ပဲလွန်းနီဟု၍ အရောင်ကွဲပြားမှုရှိပါသည်။ ပဲလွန်းကို အချို့ဒေသများတွင် နီညိုရောင်အဆင်းရှိ၍ ပဲစအုဟုခေါ်သည်
အသီး၏ပုံသဏ္ဍာန်မှာ ပဲတောင့်ရှည်မျိုးဖြစ်ပြီး အလျား (၇) လက်မမှ (၁၂) လက်မထိရှည် ပါသည်။ ပဲတောင့်၏အရောင်အဆင်းမှာ အစိုနုသောအခါတွင် အစိမ်းရောင်သမ်းပြီး ရင့်မှည့်ခြောက် သွေ့သောအခါ ကောက်ရိုးခြောက်အရောင် ကြက်ဥခွံကဲ့သို့ဝါဖျော့သောအရောင်ရှိပါသည်။ ပဲတစ်တောင့် လျှင် (၈) စေ့မှ (၁ဝ) စေ့ခန့်ပါရှိတတ်ပါသည်။ ပဲလွမ်းအစိုများကို နုသည့်အချိန်တွင် အတောင့်လိုက် ဆွတ်ခူး၍ ရောင်းချစားသုံးလေ့ရှိပါသဖြင့် အထွက်နှုန်းလျော့နည်းမှုရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ့ရပါသည်။
ပဲမျိုးစုံအကြောင်းမှတ်တမ်းတွင် အာဟာရဓါတ်ပါဝင်မှုကို အောက်ပါအတိုင်း လေ့လာဖော်ပြ ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
(၁) အစိုဓါတ် (Moisture %) ၁၁.ဝဝ %
(၂) အဆီဓါတ် (Fat %) ၁.၃ဝ %
(၃) အမျှင်ဓါတ် (Fibre %) ၃.၉ဝ %
(၄) ပရိုတင်းဓါတ် (Protein %) ၂၅.၆ဝ %
(၅) ပြာဓါတ် (Ash %) ၃.၆ဝ %
(၆) ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် (Carbo Hydrate %) ၅၆.၈ဝ %
ကြိုက်နှစ်သက်သည့် ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသည့်ကာလနှင့် ရိတ်သိမ်းသည့်ကာလ
ပဲလွန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏အရပ်ဒေသတိုင်းတွင် စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါသည်။ နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း ရာသီအမျိုးမျိုးဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိ၍ စိုက်ပျိုးရန်အလွယ်ကူဆုံး ပဲသီးနှံဖြစ်ပါသည်။ အထူး သဖြင့် အေးမြ ခြောက်သွေ့သော ရာသီဥတုကိုကြိုက်နှစ်သက်မှုရှိပါသည်။
ပဲလွန်းများကို သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလများတွင် စတင်စိုက်ပျိုးလေ့ရှိပါသည်။ ပဲလွန်းသည် ဇွန်လမှ အောက်တိုဘာလအတွင်း မည်သည့်အချိန်မဆို စိုက်ပျိုးနိုင်သောသီးနှံဖြစ်ပါသည်။ ပဲလွမ်း များကို စိုက်ပျိုးရန်အတွက် (၁၈) လက်မအကွာ ထွန်ကြောင်းများဆွဲ၍ (၈) လက်မမှ (၁) ပေခန့်အကွာအဝေး ခြား၍မျိုးစေ့ချပြီး စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ မျိုးစေ့တစ်ကျင်းလျှင် (၂) စေ့၊ (၃) စေ့ချ၍ စိုက်ပျိုးလေ့ရှိပါသည်။
ပဲလွန်းများကို စိုက်ပျိုးပြီး (၅)လမှ (၆)လခန့်အချိန်ဖြစ်သော ဒီဇင်ဘာလနှင့်ဇန်နဝါရီလ များတွင် ရိတ်သိမ်းနိုင်ပါသည်။ ပဲလွန်းကို မျိုးတူအုပ်စုဖြစ်သော ဘိုကိတ်ပဲ၊ ပဲစဉ်းငုံ၊ ပဲတီစီမ်းများနှင့် တစ်ချိန် တည်းလို အပင်ရိတ်သိမ်းပါသည်။ ထိုပဲမှာ သီးတောင့်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ သီးစေ့အဖြစ်လည်းကောင်း စားသုံးနိုင်သဖြင့် ဆောင်းရာသီတွင် ဆွတ်ခူးရိတ်သိမ်းကြပါသည်။
ပဲလွန်းကို အသီးနုချိန်တွင် ဟင်းလျာအဖြစ် ပြုတ်၊ ချက် စားသုံး၍ အသီးမှည့်ချိန်တွင် ကောက်ညှင်းနှင့်ပေါင်းစားခြင်း၊ အစေ့ကိုလှော်စားခြင်း၊ ဆန်နှင့်ရော၍ (မန္တလေးပဲကြော်၊ ပဲစအုကြော် အဖြစ်) ကြော်စားခြင်၊ အပင်ဖောက်စားသုံးကြသည်။
Copyright © 2013 MPBSA . All Rights Reserved. Powered by eTrade Myanmar Co.,Ltd.